DAAWO: Madaxweyne Farmaajo muxuu ka yiri Ammaanka, Doorashooyinka & Xariirka D/Gobaleedyada la leeyahay?
September 27, 2019 NEWS 0
NEW YORK(P-TIMES) – Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay ka hadlayay fadhiga golaha ammaanka ee Qaramada Midowbay ayaa diiradda ku saaray arrimaha ku wajahan doorashooyinka 2020-ka, Ammaanka, siyaasadda iyo xariirka uu la leeyahay dawlad gobaleedyada dalka.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in ay wali caqabado waa weyn ka haystaan xagga ammaanka, wuxuu sheegay in dagaalka Al- Shabaab uu yahay mid wali socda, sidaas oo kalena dhismaha ciidamada ayuu sheegay in uu ku socdo si hoose, sababtuna ay tahay maadaama ay dhinac dagaal uga jiraa dhinaca dhinaca dibu dhis.
Madaxweynuhu wuxuu codsaday taageero dhaqaale iyo mid milateri oo lasiiyo dalkiisa soo kaabanaya, isagoo tilmaamay in arrimaha waa weyn ee taagan ay u baahan yihiin wax ka qabasho muhiim ah.
Sidaas oo kale doorashooyinka la qorsheynayo wuxuu sheegay in ay waqtigooda ku dhici doonaan, ayna bisha May soo gudbi doonaan hanaanka codbixinta Shacabka, taas oo ahayd arrimo waa weyn oo laga sgayay dawladdiisa, laakiin wali lama dhameystiran Dastuurka KMG ah afti dadweyne looma qaadin ilaa hadda.
Dawlad gobaleedyada ayuu sheegay in ay ka wada dhaceen doorashooyin wanaagsan, isagoo cadeeyey in ay muhiim ahayd in ay dhinacyada oo dhan isfaham ku dhameysteen doorashooyinkaas oo saameyn lahaa.